Brendan Rodgers oo Cadeeyay go’ankiisa Shaqada Kooxda Newcastle United iyo Hadii uu Qabanayo | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Brendan Rodgers oo Cadeeyay go’ankiisa Shaqada Kooxda Newcastle United iyo Hadii uu...
Brendan Rodgers oo Cadeeyay go’ankiisa Shaqada Kooxda Newcastle United iyo Hadii uu Qabanayo
Tababaraha kooxda Leicester City Brendan Rodgers ayaa lagu soo waramayaa inuusan danaynaynin inuu noqdo tababaraha cusub ee kooxda Newcastle United , haddii Steve Bruce la eryo.
Ka dib markii Magpies ay £ 300m kula wareegeen Sucuudiga todobaadkii hore, waxaa la filayaa in Bruce laga qaadi doono waajibaadkiisa ka hor kulanka Premier League ee ay toddobaadkan la yeelan doonaan Tottenham Hotspur.
Warar hore ayaa sheegayay in dhowr maamule ay u tartamayaan bedelka 60 jirkaan ku sugan St James Park, oo ay ku jiraan Graham Potter , Steven Gerrard , Frank Lampard iyo Antonio Conte .
Rodgers waa magac kale oo lala xiriirinayo, si kastaba ha ahaatee saxafiga John Percy oo ka tirsan Daily Telegraph ayaa ku andacoonaya in Macalinka reer Northern Ireland uusan dan ka lahayn inuu qabto xilka Newcastle.
48 jirkaan ayaa saxiixay qandaraaska King Power Stadium bishii Diseembar 2019, waxana uu ku egyahay ilaa Juun 2025.
Previous articleThomas Frank oo ka hadlay in lala Xiriiriyo Shaqada kooxda Arsenal
Next articleWakiilka Ansu Fati oo Sheeko Cusub kasoo saaray Heshiiska Xidigan ee Kooxda Barcelona